Tag: Chikamu.io | Martech Zone
Dzvanya kubiridzira kunoenderera kuve kwakazara mumubhadharo pabhizimusi rekubaya. Chii chinonzi kubiridzira? Dzvanya kubiridzira kunoitika kana munhu, otomatiki script kana chirongwa chekomputa achiteedzera mushandisi zviri pamutemo webhurawuza richidzvanya kushambadziro. Dzvanya kubiridzira kunoitika kuwedzera zvisina kukodzera mari yeiyo saiti yekutambira kana kudhonza iyo mubhadharo pakuki bhajeti yemukwikwidzi. Dzvanya kubiridzira kunoenderera kuve nyaya yemakakatanwa uye kuwedzera matare akakodzera
Rutsva URL: Chenesa kumusoro Ma URL ako ekugovana
Muvhuro, Kukadzi 17, 2014 NeChishanu, Gumiguru 24, 2014 Douglas Karr
Vanhu vakanaka paWistia vagadzira cross-browser script inonzi Fresh URL iyo iwe yaunogona kuisa mune yako saiti iyo inobvisa zvese zvekunze zvekutevera mushandirapamwe uye imwe isingakodzere querystring kodhi kubva ku URL yako. Ichi chishandiso chikuru nekuti zvinoreva kuti makodhi ako emushandirapamwe haazoshandiswazve sevanhu vanogovana zvinongedzo kunzvimbo yako. Semuenzaniso, kana iwe uine email mushandirapamwe neyako mushandirapamwe kubvunza pamusoro payo… uye imwe ye
Hechino chiwanikwa chako… ko kana iwe uchikwanisa kubatanidza yako projimendi manejimendi sisitimu ine pa - screen zvirevo kuti zvive nyore kumhan'ara nyaya uye kugadzirisa mabasa pawebhu? Kwete yekugovana screenshots, kushamisika nezve browser shanduro, kana kuyedza kutsanangura nyaya dzakatsanangurwa nemumwe munhu kwete sehunyanzvi iwe zvauri. Ko kana iwe uchingogona kuvhura vhura iyo browser app, nongedzera, tinya uye utaure nyaya ine yako saiti zvakananga kune yako webhu timu kana